गोविन्द केसीको माग सम्बोधनमा दबाब दिन बालुवाटार घेराउ
२०७३ मङ्सिर ४ शनिबार, काठमाडौं । विभिन्न ९ बुँदे माग राखेर १०औंपटक आमरण अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा बालुवाटार घेराउ भएको छ । विवेकशील नेपाली पार्टीको आह्वानमा शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा घेराउ भएको हो । नारावाजीसहित घेराउ गर्न पुगेकाहरुले डा. केसीका अविलम्ब पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो जनताका मौलिक अधिकारप्रति सरकारले कुठाराघात गर्न खोजेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । नवौं अनसनमा अख्तियार प्रमुखमाथि ... बाँकी अंश»
‘संविधान संशोधनको विषयमा स्थानीयस्तरमा छलफल आवश्यक’
२०७३ मङ्सिर ४ शनिबार, काठमाडौँ। संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रमा नेताहरुबीच मात्रै छलफल नगरी स्थानीयस्तरमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको शनिबार आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । पूर्व सांसद मञ्चले आयोजना गरेको ‘नेपालको संविधानका चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सीमाङ्कनका विषयमा सम्बन्धित जिल्लाका बासिन्दाको मत लिनुपर्ने बताए । उनीहरुले राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्य अग ... बाँकी अंश»
२०७३ मङ्सिर ४ शनिबार, कञ्चनपुर । माछा चोरी हुनबाट जोगाउन कञ्चनपुरका देखतभूली र सङ्करपुरका राना थारु समुदायका व्यक्ति चार महिनासम्म दोदा नदीको बगरमा डेरा जमाएर बस्छन् । नदीमा माछा फसाउन राखिएका धिमरी र त्यसमा फसिएका माछा चोरी हुनबाट जोगाउन उनीहरु बगरमा बास बस्दै आएका हुन् । मङ्सिर महिनाको सुरुआतदेखि फागुनको अन्त्यसम्म माछा मार्नका लागि उनीहरु नदीमा धिमरी राख्ने गर्छन् । नदीको वारपार गरी माछा फसाउन राखिएका धिमरी बाँसबाट निर्माण गरिन्छन् । माछाभित्र छिर्न सक् ... बाँकी अंश»
पुँजी उपलब्ध गराउँदा पनि औषधि पसल सञ्चालन भएनन्
२०७३ मङ्सिर ४ शनिबार, काठमाडौँ । औषधिको गुणस्तरीयता कायम राख्न तथा बिरामीलाई ठगिनबाट जोगाउन सरकारले हरेक सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई आफ्नै औषधि पसल खोल्न निर्देशन दिँदै बीउ पुँजी समेत पठाइसकेको छ । तर औषधि पसल सञ्चालन भने अझै हुन सकेको छैन । अस्पतालभित्र वा स्वास्थ्य संस्था वरपरी खोलेका निजी औषधि पसलबाट बिरामी त ठगिएका छन् नै, त्यसमा पनि सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएका औषधि पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । आफै औषधि पसल खोल्दा घाटा हुने र व्यवस्थित समेत गर्न नसकिन ... बाँकी अंश»
उपेन्द्र भन्छन्–७ प्रदेशको सीमांकन मान्य हुँदैन, १० प्रदेश नै चाहिन्छ
२०७३ मङ्सिर ४ शनिबार, काठमाडौं । संघीय गठबन्धन संयोजक एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले हल्ला भएजस्तो संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइए त्यो कुनै हालतमा आफूहरुले नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा गठबन्धन संयोजक यादवले भने,‘अहिले सरकारले ४ बुँदे संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ, यदी यो कुरा साँचो हो भने हामी त्यसलाई कुनै हालतमा मान्दैनौं, यसले समस्याको समाधान हुँदैन् । ... बाँकी अंश»
हेटौडामा जीप दुर्घटना, दुईको मृत्यु, सुरक्षाकर्मीसँगै उद्धारमा खटिए कमल थापा
२०७३ मङ्सिर ४ शनिबार, हेटौडा । मकवानपुरको भीमफेदी जुरीखेतमा जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा घाइते भएको तीन मध्ये एकको अवस्था चिन्ताजनक छ । ... बाँकी अंश»
संविधान संशोधन अघि बढाउन मुख्य दल सहमत : वर्षमान
२०७३ मङ्सिर ४ शनिबार, विराटनगर । सत्ताधारी माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले एक साताभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्य दल सहमत भइसकेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीसंग नेता पुनले मंसिर ६ गते संविधान संसोधनका विषयमा मुख्य दल र मधेशी मोर्चाबीच सैद्धान्तिक सहमति हुने र मंसिर ७ नभए ८ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुने बताए । संविधान संशोधनका लागी प्रतिपक्षीदल एमाले पनि सहमत भएकाले अब चाँडै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि ब ... बाँकी अंश»
अन्धविश्वासका कारण अझै छाउँगोठमै बस्छन् महिला
२०७३ मङ्सिर ४ शनिबार, जुम्ला । यहाँको रारालिही गाविस जुम्लाका महिनावारी भएका र सुत्केरी महिला अहिले पनि छाउँगोठमै बस्दै आएका छन् । राज्य मातहतका स्थानीय सरकारी निकाय र गैर सरकारी सङ्घ÷संस्थाले छुई प्रथा न्यूनीकरण अभियान थालेको बेला रारामा यो समस्या अहिले पनि कम नभएको देखिएको हो । उनीहरु महिनावारीका बेला सात र सुत्केरी हुँदा १८ दिन छाउँगोठमा बस्ने गरेको स्थानीयवासी धना बुढाले बताए। सुत्केरी र महिनावारी हुँदा छुनुहुँदैन भन्ने कुप्रथाका कारण महिलाले फोहर ... बाँकी अंश»
विश्व चर्पी दिवसः दुई अर्ब चालिस करोड मानिस शौचालय विहीन
२०७३ मङ्सिर ४ शनिबार, भक्तपुर । आज ‘विश्व चर्पी दिवस’ । विश्वभर ‘शौचालय र काम’ नाराका साथ यस वर्ष नोभेम्बर १९(मङ्सिर ४) मा ‘विश्व चर्पी दिवस’ मनाइँदैछ । विश्वमा दुई अर्ब चालिस करोड मानिस शौचालय विहीन भएको बताइएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य २०१५ मा सन् २०३० भित्र विश्वका हरेक स्थानमा हरेक मानिसमा शौचालयको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन २०१५ को तथ्याङ्कानुसार विश्वभर १० जनामा एक जनाले खुलेआम दिसापिसाब गर्ने गरेको पाइएको छ । डब्लुए ... बाँकी अंश»
२०७३ मङ्सिर ४ शनिबार, तिलोत्तमा (रुपन्देही) । रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले संविधानले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्न सरकारले अहिले संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीको क्षेत्र नं ७ ले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा खाँणले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा लगायतलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन गर्न सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरेको जानकारी दिए। सं ... बाँकी अंश»
सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याउनका लागि चुनाव हुन्छ : अध्यक्ष ओली
२०७३ मङ्सिर ३ शुक्रबार, काठमाडौँ। नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव हुनेमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन् । एमाले काठमाडौँ जिल्ला सङ्गठन कमिटीले शुक्रबार नेपाल संवत् ११३७ का अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा ओलीले सङ्क्रमणकाल टुङ्याउनका लागि चुनाव अपरिहार्य भएको बताउँदै चुनाव हुनेमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गरे। “अहिले भइरहेका षड्यन्त्र असफल बनाएर एमालेले चुनाव गराउँछ”– उनले भने, “चुनाव हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन ।” पूर् ... बाँकी अंश»
स्ववियु निर्वाचन फागुनमा हुने
२०७३ मङ्सिर ३ शुक्रबार, काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी फागुन १४ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचनका लागि शुक्रबार विद्यार्थी सङ्गठनहरुसँग छलफल गरेको छ । स्ववियु निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचनलाई सफल बनाउने र निर्वाचनसम्बन्धी केही आचारसहिंताका बारेमा विद्यार्थी सङ्गठनसँग छलफल गरिएको त्रिविका उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँले बताए । “फागुनमा निर्वाचन गर्नेमा विद्यार्थी सङ्गठनमा विवाद देखिएन”,उनले भने, “सबै सकारात्मक हुन ... बाँकी अंश»
महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल आइतबार सकिने
२०७३ मङ्सिर ३ शुक्रबार, काठमाडौँ। आगामी आइतबारसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल टुङ्गोमा पुग्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकपछि शुक्रबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले महाभियोगका विषयमा लामो समयसम्म छलफल गर्नेभन्दा पनि छिटो टुङ्ग्याउन आफूले प्रमुख दलका नेतालाई अनुरोध गरेको र प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले कुरा राख्न प्रमुख सचेतकमार्फत सा ... बाँकी अंश»
छुट्टै गाउँपालिका माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित
२०७३ मङ्सिर ३ शुक्रबार, सिन्धुली । स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक समितिले सिन्धुली जिल्लालाई २ नगरपालिका सहित ८ गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेपछि त्यसको बिरोधमा स्थानीयहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । तीनपाटन क्षेत्रलाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउनु पर्ने माग सहित शुक्रबार स्थानीयहरु नाराबाजी सहित जिल्ला सदरमुकाम आएर पुर्नसंरचना समितिका संयोजक स्थानीय विकास अधिकारी शिव प्रसाद हुमागाईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । एक साता अघि मात्र पुर्नसंरचना प्राविधिक समितिल ... बाँकी अंश»
पुर्नसंरचनाको विवादलाई लिएर प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप, ७ जना घाईते
२०७३ मङ्सिर ३ शुक्रबार, पाँचथर । जिल्लामा फाल्गुनन्द गाउँपालिका कायम राख्न र अखण्ड रानीटारको माग गर्दे आन्दोलित स्थानिय र प्रहरीबीच शुक्रबार सदरमुकाम फिदिममा झडप भएको छ । झडपका क्रममा २ जना प्रहरी घाईते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी नायव उपरिक्षक नकुल पोख्रेलले जनाएका छन् । यस्तै ५ जना प्रदर्शनकारी समेत उक्त झडपमा घाईते भएको बताइएको छ । प्रदर्शनकारीको ढुंगा प्रहारबाट जिविसका निमित्त स्थानिय विकाश अधिकारी भानु बराल, इन्जिनियर प्रेम चन्द्र गौत ... बाँकी अंश»
तातोपानीमा दिएको सुविधा रसुवागढी–केरुङ नाकामा पनि दिन चीन सहमत
२०७३ मङ्सिर ३ शुक्रबार, काठमाडौ । चीन सरकार नेपाललाई तातोपानी नाका मार्फत् दिएका सबै सुविधा रसुवा–केरूङ नाकामा पनि दिन सहमत भएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासामा चलिरहेका नेपाल–चीनबीचका दुई बैठकमा केरुङ नाका सञ्चालनमा चीन उदार देखिएको चिनियाँ सञ्चार संस्था चाईना रेडियाे इन्टरनेशनलले जनाएको छ । चीन सरकारले तातोपानी–खासा नाकाबाट उपलब्ध गराउँदै आएका सबै सुविधा रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट पनि उपलब्ध गराउने भएपछि नेपाल चीन व्यापारमा भने ... बाँकी अंश»
परराष्ट्रमन्त्री महतसँग चिनियाँ राजदूतको भेट
२०७३ मङ्सिर ३ शुक्रबार, काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग शुक्रबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरवारमा भेटवार्ता गरेकी छन् । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतमा हालै नियुक्त भएकी होङले परराष्ट्रमन्त्री महतसँग पहिलोपटक भेट गरेकी हुन् । भेटका अवसरमा द्विपक्षीय हित र आपसी सम्बन्धका विभिन्न विषयमा कुराकानी भएको थियो । त्यस अवसरमा नेपाल र चीनबीच विगतमा भएका विविध समझदारीको कार्यान्वयनका विषयमा पनि सौहार्दपूर्ण रुपमा छ ... बाँकी अंश»
संविधान संशोधन प्रस्ताव मंसिरको ६ वा ७ गते संसदमा दर्ता हुन्छ : वर्षमान पुन
२०७३ मङ्सिर ३ शुक्रबार, काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले यही हप्ता अर्थात मंसिर ६ वा ७ गते सरकारले सहमतिका साथ संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने खुलासा गरेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता पुनले प्रमुख तीन दलवीच सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै यही मंसिर ६ वा ७ गते प्रस्ताव सरकारले पेश गर्ने बताएका हुन् । बालुवाटारमा बिहीबार भएको तीन दलको बै ... बाँकी अंश»
त्रिपुर नगरपालीकाले स्थापना दिवस मनाउने
२०७३ मङ्सिर ३ शुक्रबार, त्रिपुर।दाङको कान्छो नगरपालीकाको रुपमा रहेको त्रिपुर नगरपालीकाले आफ्नो स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाउने भएको छ । आज नारायणपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नगरपालिकाले स्थापना दिवस यहीँ मंसिर १६ गते भब्य रुपमा मनाउन लागेको कार्यकारी अधिकृत कमान सींह थापाले जानकारी दिएका छन् । यहीँ मंसिर १६ गते परेको स्थापना दिवसलाई ब्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि कार्यकारी अधिकृत कमान सींह थापाको संयोजनमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । जस ... बाँकी अंश»
२०७३ मङ्सिर ३ शुक्रबार, सोलुखुम्बु । दिनप्रतिदिन बढिरहेको चिसोले इलाका प्रहरी कार्यालय नाम्चेमा कार्यरत प्रहरीलाई नागरिक सुरक्षाभन्दा पनि बढी जाडोबाट आफ्नो शरीरलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने चिन्ता छ । गर्मी समयमै पनि ज्याकेट बिना बाहिर निस्कन र बाक्लो सिरक बिना रात बिताउन नसकिने नाम्चेका प्रहरीलाई आजभोलि दिन त जसोतसो बित्छ तर रात कसरी बिताउने भन्ने चिन्ता हुन्छ । चारैतिर हिमालले घेरेको तीन हजार ६०० मिटर उचाइमा रहेको नाम्चेका प्रहरी जाडोमा थरथर काँपेरै दिनर ... बाँकी अंश»